ဒီယဂေို အဲလျဗကျဈ၊နဲ့ ကားဆီးလကျအတှကျကတော့ မကျဆီနဲ့ Budweiserကပေါငျးပွီးပေးတဲ့ ခရစ်စမတျလကျဆောငျက ပြျောရှငျစရာဖွဈခဲ့ရဲ့လား…. – Premier League Special
Budweiser ကတော့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူးမကျဆီနဲ့ပတျသကျပွီး တဈကမ်ဘာလုံးကို အံ့အားသငျ့သှားစခေဲ့တဲ့ ထူးခွားတဲ့အစီအစဉျတဈခုကို လုပျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ မကျဆီက သူ့ရဲ့ကစားသမား တဈလြှောကျ ဘာစီလိုနာ အသငျးတဈသငျးမှာပဲကစားခဲ့ပွီး ပီလီရဲ့ အသငျးတဈသငျးတညျးအတှကျ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးယူထားတဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျခဲ့ပွီးနောကျမှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတဈလြောကျ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတှကေို ဘီယာပုလငျးတှေ ပေးပို့ပေးခဲ့ရငျး အာဂငျြတိုငျးသားရဲ့ စံခြိနျသဈအတှကျ ဂုဏျပွုပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာအတှကျ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးက အခုဆိုရငျ ၆၄၄ ဂိုးအထိရှိလာခဲ့တဲ့အပျေါ အထိမျးအမှတျတဈခုလုပျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။….ဒါဟာခတျေတဈခတျေရဲ့ အောငျမွငျမှုရဲ့ မှတျတိုငျလား…. လကျဆောငျရရှိသှားခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတှအေတှကျကော ကောငျးမှနျတဲ့ သမိုငျး မှတျတမျးတဈခုဖွဈရဲ့လား…. တိုကျစဈမှူးကတော့ ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာ သူ့ရဲ့တာဝနျဖွဈသလို ဂိုးသမားတှကေလညျး ကာကှယျပေးရတာ သူတို့ရဲ့ တာဝနျတဈခုပါ…
မကျဆီရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို ဂုဏျပွုပေးခဲ့တာ မကျဆီအတှကျ ဝမျးသာစရာဖွဈခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို ကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတှကေတော့ ဒီလို အခြိနျမှာ ဂုဏျပွုပေးတဲ့အစီအစဉျမှာ မပါဝငျခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ခယျြလျဆီးမှာ မကျဆီဂိုးသှငျးလို့မရခဲ့တဲ့ ပီတာခကျြဟာ ဒီအစီအစဉျမှာ မပါဝငျခဲ့ပါဘူး။
ဒီအစီအစဉျမှာ မကျဆီရဲ့ သှငျးဂိုးအရအေတှကျနဲ့အတိုငျး အထူးထုတျလုပျထားတဲ့ ဘီယာပုလငျးတှကေို Budweiser က ဖနျတီးခဲ့ပွီး မကျဆီရဲ့ ဂိုးသှငျးယူမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဂိုးသမားတှဆေီ ဘီယာပုလငျးတှေ ပို့ပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘီယာပုလငျးတှမှော မကျဆီက ဂိုးသမားတှကေို ဂိုးသှငျးယူခဲ့စဉျက သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးနံပါတျ တှကေို ရိုကျနှိပျထားခဲ့ပွီး ဂိုးသမားတှကေို ပို့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Budweiser ကုမ်ပဏီက ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ အစီအစဉျနဲ့ မကျဆီအတှကျ ကွီးမားတဲ့ဂုဏျပွုမှု တဈခုကို ဖနျတီးနိုငျခဲ့တဲ့အပျေါမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ သဘောကနြှဈခွိုကျမှုကို ရရှိနခေဲ့ပါတယျ။
တှဈတာမှာ Budweiserက အသငျးတဈသငျးထဲအတှကျ ဂိုးမြားစှာသှငျးယူနိုငျတဲ့ သူ့လို (GOAT) တဈယောကျလိုမြိုး နောကျထပျတဈယောကျ ကို ကြှနျတျောတို့ မတှဖေူ့းပါဘူး။ ဘုရငျတှဆေိုတာ တဈညတညျး ဖွဈလာတာ မဟုတျဘူးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ မကျဆီ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ကွျောငွာလေး တငျခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီကလညျး “လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ၂၀က ကြှနျတျောဟာ အကောငျးဆုံး ကစားသမား ဖွဈလာဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့အတူ ခရီးရှညျတဈခု စတငျခဲ့ပွီးတော့ အသငျးဖျောတှရေဲ့ ကူညီမှုကွောငျ့ ရခဲ့တဲ့ ၆၄၄ဂိုးမှာ ပွငျးထနျတဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကြှနျတေျာ့ ဇာတျလမျးကို ကွညျ့ပွီး တှနျးအားတှေ ရစဖေို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။ ဘယျလောကျခကျခဲတဲ့ အရာဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိရငျ အရယူနိုငျမှာပါ။ Budweiserနဲ့ အတူ ပွနျလညျ မြှဝခှေငျ့ရလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးတိုငျးဟာ လှယျလှယျကူကူနဲ့ ရရှိခဲ့တာမဟုတျဘူးလို့ ပွောဆိုခဲ့ပွီး ပွိုငျဘကျအသငျးခံစဈနဲ့ ဂိုးသမားတှရေဲ့ အားထုတျမှုတှကေို ခကျခကျခဲခဲရငျဆိုငျကြျောဖွတျခဲ့ရတယျလို့လညျး ဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ Budweiser က ဒီအစီအစဉျရဲ့ အထူးထုတျလုပျထားတဲ့ ဘီယာပုလငျးတှေ ကို မကျဆီ ဂိုးသှငျး ခဲ့သမြှ ဂိုးသမားတှေ ရဲ့ လကျထဲ ကို အရောကျ ပေးပို့ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒီလို ပေးပို့ ရာမှာတော့ တဈခြို့ ဂိုး သမားတှဆေိုရငျ ဘီယာ ပုလငျး တှေ ကို ဒါဇငျ ကြျောတဲ့ အထိ ရရှိ သှားခဲ့ ကွပါတယျ ။ မကျဆီ ရဲ့ ဂိုးသှငျးမှု ကို အမြားဆုံး ခံခဲ့ ရတဲ့ ဂိုး သမား ကတော့ ဒီယဂေို အဲလျဗကျဈ ပဲ ဖွဈပါတယျ ။
၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှဈ အထိ လာလီဂါ အသငျးတေါဖွဈတဲ့ အဲလျမေးနီးယားနဲ့ ဗလနျစီယာတို့ မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ဒီယဂေို အဲလျဗကျဈ ဟာ မကျဆီ ရဲ့ ဂိုးသှငျးမှု ကို ၂၁ ကွိမျ ခံခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ လကျရှိ ဖလာမငျဂို မှာ ကစား နတေဲ့ ဟာ ဘီယာ ၂၁ ပုလငျး ကို ခရစ်စမတျ လကျဆောငျ အဖွဈ ရရှိ သှားခဲ့ပါတယျ။
ရီးရဲလျဂိုးသမား ကာဆီးလကျဈဆိုရငျလညျး မကျဆီရဲ့သှငျးဂိုးကို ၁၇ ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရတာကွောငျ့ Budweiser ပုလငျး ၁၇လုံးအထိ ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
ဘူဖှနျက “ဘီယာတှအေတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒါကို လကျဆောငျလို့ သဘောထားလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကွား နှဈတှအေမြားကွီး တိုကျပှဲဝငျမှုတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ၆၄၄ဂိုးနဲ့ စံခြိနျသဈ တငျလိုကျတဲ့ မကျဆီကို ဂုဏျပွုပါတယျ။ အဲ့ဒါက မယုံနိုငျစရာ အောငျမွငျမှုပါ။ ခြီးယား”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
အကျတလကျတီကို ဂိုးသမား အိုဘလကျ ကတော့ မကျဆီ ရဲ့ သှငျးဂိုး ၁၀ ဂိုး ကိုခှငျ့ပွုခဲ့ရတာကွောငျ့ ဘီယာ ၁၀ ပုလငျး လကျဆောငျ ရရှိ ခဲ့ပါတယျ။ ဘီယာပုလငျးတှရေရှိခဲ့ကွောငျးကိုလညျး အိုဘလကျ က အငျစတာဂရမျ မှာ ဖျောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ။ အိုဘလကျက “လီယို မငျးရဲ့အောငျမွငျမှု ၆၄၄ မှတျတမျးအတှကျ ဂုဏျယူပါတယျ။ မငျးရဲ့သှငျးဂိုးတှကေို တားဆီးဖို့ဆိုတာ ငါတို့ ဂိုးသမားတှအေတှကျတော့ အကောငျးဆုံးစိနျချေါမှုပါပဲ။ ဘီယာတှအေတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။” ဆိုပွီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
ခြဲလျဆီးရဲ့ စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေးရှငျ ဂိုးသမား ကီပါကလညျး ဘီဘာအိုမှာကစားခဲ့စဉျက မကျဆီနဲ့ ရငျဆိုငျစဉျ ဂိုးပေးခဲ့ရဖူးတာကွောငျ့ ပုလငျးအခြို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဘီယာပုလငျးနံပါတျ (၆၄၄)ကိုတော့ သူ့ရဲ့ဘာစီလိုနာအသငျးဖျောဟောငျး ဗယျလာဒိုလဈဂိုးသမား ဂြျောဒီမာဆဈကရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီယေဂို အဲလ်ဗက်စ်၊နဲ့ ကားဆီးလက်အတွက်ကတော့ မက်ဆီနဲ့ Budweiserကပေါင်းပြီးပေးတဲ့ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်က ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား….မက်ဆီရဲ့ အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေကတော့ အရမ်းတွေပျော်ရွှင်နေပြီး တွစ်တာမှာ အောင်ပွဲခံနေကြပါပြီ…. စံချိန်တစ်ခု ထပ်တင်လိုက်တဲ့ မက်ဆီအတွက် ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်ပြုမှုကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Budweiser
Budweiser ကတော့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးမက်ဆီနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ မက်ဆီက သူ့ရဲ့ကစားသမား တစ်လျှောက် ဘာစီလိုနာ အသင်းတစ်သင်းမှာပဲကစားခဲ့ပြီး ပီလီရဲ့ အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လျောက် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတွေကို ဘီယာပုလင်းတွေ ပေးပို့ပေးခဲ့ရင်း အာဂျင်တိုင်းသားရဲ့ စံချိန်သစ်အတွက် ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအတွက် သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးက အခုဆိုရင် ၆၄၄ ဂိုးအထိရှိလာခဲ့တဲ့အပေါ် အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။….ဒါဟာခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ မှတ်တိုင်လား…. လက်ဆောင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတွေအတွက်ကော ကောင်းမွန်တဲ့ သမိုင်း မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ရဲ့လား…. တိုက်စစ်မှူးကတော့ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာ သူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလို ဂိုးသမားတွေကလည်း ကာကွယ်ပေးရတာ သူတို့ရဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါ…
မက်ဆီရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာ မက်ဆီအတွက် ဝမ်းသာစရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတွေကတော့ ဒီလို အချိန်မှာ ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ချယ်လ်ဆီးမှာ မက်ဆီဂိုးသွင်းလို့မရခဲ့တဲ့ ပီတာချက်ဟာ ဒီအစီအစဉ်မှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအစီအစဉ်မှာ မက်ဆီရဲ့ သွင်းဂိုးအရေအတွက်နဲ့အတိုင်း အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘီယာပုလင်းတွေကို Budweiser က ဖန်တီးခဲ့ပြီး မက်ဆီရဲ့ ဂိုးသွင်းယူမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဂိုးသမားတွေဆီ ဘီယာပုလင်းတွေ ပို့ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာပုလင်းတွေမှာ မက်ဆီက ဂိုးသမားတွေကို ဂိုးသွင်းယူခဲ့စဉ်က သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးနံပါတ် တွေကို ရိုက်နှိပ်ထားခဲ့ပြီး ဂိုးသမားတွေကို ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Budweiser ကုမ္ပဏီက ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မက်ဆီအတွက် ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ပြုမှု တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှုကို ရရှိနေခဲ့ပါတယ်။
တွစ်တာမှာ Budweiserက အသင်းတစ်သင်းထဲအတွက် ဂိုးများစွာသွင်းယူနိုင်တဲ့ သူ့လို (GOAT) တစ်ယောက်လိုမျိုး နောက်ထပ်တစ်ယောက် ကို ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဘုရင်တွေဆိုတာ တစ်ညတည်း ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မက်ဆီ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာလေး တင်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီကလည်း “လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀က ကျွန်တော်ဟာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့အတူ ခရီးရှည်တစ်ခု စတင်ခဲ့ပြီးတော့ အသင်းဖော်တွေရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် ရခဲ့တဲ့ ၆၄၄ဂိုးမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကျွန်တော့် ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ပြီး တွန်းအားတွေ ရစေဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့ အရာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိရင် အရယူနိုင်မှာပါ။ Budweiserနဲ့ အတူ ပြန်လည် မျှဝေခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတိုင်းဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းခံစစ်နဲ့ ဂိုးသမားတွေရဲ့ အားထုတ်မှုတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Budweiser က ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘီယာပုလင်းတွေ ကို မက်ဆီ ဂိုးသွင်း ခဲ့သမျှ ဂိုးသမားတွေ ရဲ့ လက်ထဲ ကို အရောက် ပေးပို့ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒီလို ပေးပို့ ရာမှာတော့ တစ်ချို့ ဂိုး သမားတွေဆိုရင် ဘီယာ ပုလင်း တွေ ကို ဒါဇင် ကျော်တဲ့ အထိ ရရှိ သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။ မက်ဆီ ရဲ့ ဂိုးသွင်းမှု ကို အများဆုံး ခံခဲ့ ရတဲ့ ဂိုး သမား ကတော့ ဒီယေဂို အဲလ်ဗက်စ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ လာလီဂါ အသင်းတေါဖြစ်တဲ့ အဲလ်မေးနီးယားနဲ့ ဗလန်စီယာတို့ မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ဒီယေဂို အဲလ်ဗက်စ် ဟာ မက်ဆီ ရဲ့ ဂိုးသွင်းမှု ကို ၂၁ ကြိမ် ခံခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ ဖလာမင်ဂို မှာ ကစား နေတဲ့ ဟာ ဘီယာ ၂၁ ပုလင်း ကို ခရစ္စမတ် လက်ဆောင် အဖြစ် ရရှိ သွားခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလ်ဂိုးသမား ကာဆီးလက်စ်ဆိုရင်လည်း မက်ဆီရဲ့သွင်းဂိုးကို ၁၇ ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရတာကြောင့် Budweiser ပုလင်း ၁၇လုံးအထိ ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘူဖွန်က “ဘီယာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကို လက်ဆောင်လို့ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြား နှစ်တွေအများကြီး တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၆၄၄ဂိုးနဲ့ စံချိန်သစ် တင်လိုက်တဲ့ မက်ဆီကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အဲ့ဒါက မယုံနိုင်စရာ အောင်မြင်မှုပါ။ ချီးယား”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အက်တလက်တီကို ဂိုးသမား အိုဘလက် ကတော့ မက်ဆီ ရဲ့ သွင်းဂိုး ၁၀ ဂိုး ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရတာကြောင့် ဘီယာ ၁၀ ပုလင်း လက်ဆောင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဘီယာပုလင်းတွေရရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်း အိုဘလက် က အင်စတာဂရမ် မှာ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ်။ အိုဘလက်က “လီယို မင်းရဲ့အောင်မြင်မှု ၆၄၄ မှတ်တမ်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မင်းရဲ့သွင်းဂိုးတွေကို တားဆီးဖို့ဆိုတာ ငါတို့ ဂိုးသမားတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဘီယာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးရဲ့ စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင် ဂိုးသမား ကီပါကလည်း ဘီဘာအိုမှာကစားခဲ့စဉ်က မက်ဆီနဲ့ ရင်ဆိုင်စဉ် ဂိုးပေးခဲ့ရဖူးတာကြောင့် ပုလင်းအချို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘီယာပုလင်းနံပါတ် (၆၄၄)ကိုတော့ သူ့ရဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဖော်ဟောင်း ဗယ်လာဒိုလစ်ဂိုးသမား ဂျော်ဒီမာဆစ်ကရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။